2 Siyaabo Sahlan ee Delete Photos nuqul on iPad ka dib markii Casriyaynta in macruufka 7
> Resource > iPad > Delete Photos nuqul on iPad ee macruufka 9/8/7
Takhalusid sawiro ka iPad waa dhibaato haddii aadan aqoon habka saxda ah si ay u dhamaystiraan shaqada si deg deg ah aad. Sawir Professional qaadashada sawiro aad u tiro badan si ay u qaado shot ugu wanaagsan ee ay u baahan yihiin ee la tirtiro kuwa xad-dhaaf ah oo inta badan ka faa'iidaysan karaa iyadoo la isticmaalayo habka ugu fudud. Halkan waxa ku jira laba hab fudud oo aad codsan kartaa in ay tirtirto photos nuqul on iPad.
Xalka 1: Delete nuqul Photos on iPad Gacanta
Solution 2: Delete Photos nuqul on iPad ku yaalla la TunesGo Wondershare (Mac)
Sidee baan u tirtirto photos nuqul on my iPad ee macruufka 9/8/7?
Delete Single Photo ka iPad ah
Tag App Photo by saraysa bidix ilaa midig ee shaashada ka ama xataa u isticmaali gudahood camera by siyoodba icon kaalinta soo socota si ay badhanka fursadaha.
Hadda dooran tab sawirka. Tani waxay keeni doontaa dhammaan sawiradaada. Si aad u tirtirto sawir kasta hal dooran tab album ah. Hadda ka jaftaa sawirka aad rabto in aad tirtirto on. Sawirka waxa laga daawan karaa hab shaashad buuxda hadda. Dhinaca sare gacanta midig ee shaashada ku bar horyaalka dooro batoonka trashcan in ay tirtirto sawirka. Haddii badhanka trashcan aan la heli karin tuubada on dhexe ee shaashadda si ay u helaan bar horyaalka muuqan.
Delete Multiple Photos ka iPad ah
Marka hore aan bilowno app Photo ka dibna dooro set sawirrada aad dooneyso in aad tirtirto. Si aad u dooratid sawiro ka album sawir inay tagaan si ay tab Photo xaadirka on sare ee shaashadda iPad. Hadda ka jaftaa badhanka share taas oo awood u siin doona in aad dooratid sawiro aad rabto in aad tirtirto ah. Hadda bilaabi siyoodba on sawirada si ay u doortaan, waayo, tirtirka. Marka aad ka jaftaa on sawirada goobaabin buluug iyo Calaamadda ka muuqan doontaa sawirada.
Marka aad la sameeyo iyadoo xulashada tuubada sawiro ku saabsan badhanka Delete in casaan sare ee shaashadda. Farriin ka muuqan doonaa shaashadda weydiinaya haddii aad hubto in aad dooneyso in aad tirtirto ee photos soo xulay. Tallaabo xaqiijin ayaa tirtiri doonaa sawiro nuqul iPad.
Isku dayaan in ay tirtirto sawiro badan halkii la tirtiro sawir hal mar ah taas oo ah waqti.
Sidee in ay tirtirto photos nuqul on ipad 2 isticmaalaya Wondershare TunesGo (Mac)?
The Wondershare TunesGo (Mac) saamaxaya kuwa isticmaala in ay tirtirto sawiro badan waqti liiska camera, albums iyo maktabadda sawirka. Download version tijaabo ah Wondershare TunesGo (Mac) ah.
Bilaabaysaa geedi socodka adoo soo degsado TunesGo Wondershare ah (Mac) oo ku xidh ku saabsan qalabka computer Mac. Wondershare Waa la jaan qaada qalabka sida MacBook Pro, MacBook Air, Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10,10 iyo 10.11.
Isticmaalka cable isku xira USB ah, xiriiriyaan iPad in qalab computer iyo bilaabo Wondershare TunesGo (Mac). Tani waxay muujin doonaa qalab mobile shaashadda kombiyuutarka. In gacanta bidix ee suuqa waxaad ka arki kartaa qaybaha meesha aad riixi kartaa tab Photos in la furo album sawirka. Hadda waxaad dooran kartaa Ahaado (camera oo duudduuban, albums iyo maktabadda sawirka) ka meesha aad rabto in aad tirtirto sawiro. Xaqa guji sawiro si ay u doortaan kadibna hoos u soo dhaadhacay menu click on doorasho delete in ay tirtirto sawirada. Haddii aad rabto si fudud in aad soo faaruqiso maktabadda sawir aad ka dibna waxa kale oo aad isticmaali kartaa la xusho oo dhan iyo tirtirto ikhtiyaar in ay tirtirto oo dhan photos waqti.
Sida loo kaabta iPad Faylal ay si External Hard Drive
Ku rid music on iPad ka PC fudayd